Android ဖုန်းအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့ Tricks ၅ ခု – MyTech Myanmar
Android ဖုန်းအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့ Tricks ၅ ခု
Android ဖုန်းတွေက Open Source ဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်အလိုရှိသလို ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အတွက် ဖုန်းကို သေချာကလိချင်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Android ဖုန်းတွေအသုံးပြုနေတဲ့သူအများစုဟာ သူတို့ Android ဖုန်းတွေကို သုံးရတာပိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Tricks တွေကို မသိရှိကြသေးပါဘူး။
အဲ့ဒီအတွက် ကိုယ့် Android ဖုန်းကို ပိုပြီး မြန်ဆန်အောင်ပြုလုပ်ပေးမယ့် Tricks ၅ ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
1. Recent Apps ကနေ Application တွေရဲ့ Info ကိုဝင်ရောက်ခြင်း
Application တစ်ခုခုရဲ့ Data ဘယ်လောက်နေရာယူထားလဲ? ဒါမှမဟုတ် Background မှာ Run နေသလားဆိုတာကို Setting ထဲမှာရှိတဲ့ Application Info ကနေ ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Setting ထဲထိသွားစရာမလိုပဲ Recent ကို နှိပ်ပြီး Multitasking View မှာ Application တစ်ခုကို ဖိထားလိုက်ရင် App Info ထဲဝင်ရောက်သွားမှာပါ။
2. Mobile Data ကို နောက်ကွယ်မှာ မသုံးနေအောင် ပိတ်မယ်
တကယ်လို့ ကိုယ်က Mobile Data နဲ့ အဓိက အင်တာနက်သုံးနေတာဆိုရင် ကိုယ်မသိပဲ အနောက်မှာ Battery စားနေတဲ့ Background Process တစ်ခုခု Run နေတာဆိုရင် Mobile Data တွေအများကြီးကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Setting – Data Usage – Data Saver ကို On ထားတာက Background မှာ Mobile Data စားသုံးမှုကို လျော့ချပေးမှာပါ။
3. Lock Screen မှာ Notification တွေကို အသေးစိတ်မမြင်ရအောင် ပိတ်ထားမယ်
Message တစ်ခုခုဝင်ရောက်လာလို့ Lock Screen Notification မှာပေါ်လာတယ်ဆိုရင် ကိုယ်မသိစေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာပါလာရင် လူတိုင်း Lock Screen မှာပေါ်နေတာကို လိုချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် Setting – Sound & Notifications – Lock Screen ကနေ Application တစ်ခုချင်းစီအလိုက် Notification ကို ပြမှာလား မပြမှာလားဆိုတဲ့ Setting ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်။
4. Fingerprint Scanner နဲ့ အခြားသော Functions တွေအသုံးပြုမယ်
Fingerprint Scanner ကို အခြားသော Functions တွေကို အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား? Google Play Store ကနေ Fingerprint Quick Action ဆိုတဲ့ Application ကို Download ရယူလိုက်တာနဲ့ သင်နှစ်သက်သလို ဆောင်ရွက်လို့ရသွားမှာပါ။
5. ဖုန်းရဲ့ Animations ကို ပိုပြီး မြန်ဆန်အောင်ပြုလုပ်မယ်
ကိုယ့်ရဲ့ Android ဖုန်းကို ပိုပြီး မြန်အောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Setting – About Phone မှာ Build Number ကို ၇ ချက်နှိပ်ပြီး Developer Options ထဲက Window and Transition Animation Scales ကို 0.5x လောက်အထိ လျော့လိုက်ရမှာပါ။
MyTech Myanmar2018-01-07T15:52:46+06:30December 5th, 2017|HowTo, Mobile Phones|
Android TV မှာ App တှကေို Sideload ပွုလုပျနညျး
Gmail App (Android) မှာ In-app Browser ကို ပိတျနညျး
Mask တပျထားရငျး Face ID နဲ့ iPhone ကို Unlock ပွုလုပျနညျး
Find My Mobile Samsung Tool ကို ဘယျလိုပွငျဆငျထားမလဲ
Facebook ပွသပေးတဲ့အတိုငျး မဟုတျဘဲ ပို့ဈအသဈတှကေို News Feed မှာ အရငျဆုံး ကွညျ့ရှုနညျး
Facebook ကို အဝေးကနေ ဘယျလို Log Out လုပျမလဲ
အိတျစဈဆေးတဲ့မူဝါဒကွောငျ့ တရားစှဲဆိုတဲ့ဝနျထမျးတှကေို ဒျေါလာသနျး ၃၀ ပေးဖို့သဘောတူလိုကျရတဲ့ Apple
Gmail ထဲက ဆကျသှယျဖူးတဲ့သူတှကေို Contact List ထဲ မရောကျအောငျ ဘယျလိုပွုလုပျကွမလဲ
ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ Chip ပွတျလပျမှုဖွဈနပေမေဲ့ တတိယသုံးလပတျမှာ ဝငျငှစေံခြိနျတငျခဲ့တဲ့ Samsung
Samsung အနနေဲ့ ကျောပီကူးသငျ့တဲ့ iPhone ရဲ့ကောငျးမှနျတဲ့အရာနှဈခု
Facebook Messenger Bot ကို Set Up လုပျနညျးနဲ့ အသုံးပွုနညျး
Snapdragon 695 Chipset နဲ့ realme Pad X Tablet ကို တရားဝငျမိတျဆကျလိုကျပွီ
တရုတျ PC ဈေးကှကျ ၁ ရာခိုငျနှုနျး ကဆြငျးသှားပမေဲ့ Lenovo ကတော့ ဦးဆောငျနဆေဲဖွဈ
Dimensity 1300, 6,000mAh ဘကျထရီ အသုံးပွုလာမဲ့ Vivo T2x ကို မိတျဆကျတော့မယျ